Maamuus - Shineon Technology Co., Ltd.
Shineon waxaa loo xushay 2013 herring top 100 global
SANTA MONICA, Calif.-DATE-Red Herring waxay ku dhawaaqday Top 100 Global iyada oo la aqoonsan yahay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka soo jeeda Waqooyiga Ameerika, Yurub, iyo Aasiya maanta, iyagoo u dabaaldegaya kuwan cusub ee bilowga ah iyo teknoolojiyada ku baahsan warshadaha ay ka soo kala jeedaan.
Shineon ayaa la gudoonsiiyay abaalmarinta shirkadda qaran ee tiknoolajiyadda sare.
Subaxnimadii 16-kii Maarso, Shirka Hal-abuurka Dhaqaalaha iyo Teknolojiyada ee 2019 waxaa qabtay Nanchang Maamulka Sare ee Tiknoolajiyada qolka hurdada ee Nanchang 28th laanta tikniyoolajiyadda dugsiga sare. Shirka ayaa ujeedkiisu ahaa in si guud loo eego loona soo gabagabeeyo ...
2011 global cleantech 100 abaalmarin
Si aad ugu qalanto Global Cleantech 100, shirkaduhu waa inay ahaadaan kuwa madaxbanaan, macaash doon ah oo aan ku qorneyn wax kala iibsiga saamiyada weyn. Sannadkan, waxaa la magacaabay 8,312 shirkadood oo ka kala socda 80 dal, Shineon ayaa ka mid ah. Nidaamka xulashada wuxuu isku daraa xogta cilmi baarista ee Kooxda 'Cleantech Group' iyo xukunno tayo leh oo laga soo magacaabay ...